Fursadaha binary waa sahlan: heerarka taageerada iyo iska caabinta. Qeybta 1. | vfxAlert official blog
Ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah waa mid fudud: heerarka taageerada iyo iska caabinta. Qeybta 1.
Haddii aad falanqeyso sida calaamadaha ikhtiyaari ikhtiyaari ah ay u shaqeeyaan oo ay u daawadaan dhaqdhaqaaqa sicirka ee hanti kasta oo maaliyadeed, waxaad arki kartaa aagagga uu dhaqdhaqaaqa "joogsanayo", sida haddii ay soo food saartay caqabad adag. Isbeddelku wuu soo jeesan karaa, sii wadi karaa dhaqaaq, ama dhinac ayuu u socon karaa. Aagagga muhiimka ah ee noocan ah waxaa loo yaqaan heerarka taageerada iyo iska caabinta.
Laga soo bilaabo suuqa dhaqaalaha, muuqaalka heer taageero iyo iska caabin ah wuxuu leeyahay laba sababood:
Waxqabadka suuq sameeyeyaasha
Xaqiiqdii, tani waa qiimaha ay kujirto dan weyn ama uruurinta amarro aan sugeyn. Iyadoo aan loo eegin tixgelinta ay hageyso kuwa sameeya suuqa markay dooranayaan heer gaar ah, waxaa muhiim ah inay ku dhibtoonayaan inay beddelaan isku dheelitirka awoodda u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyaasha.
Sawirka, kor u kaca iyo heerarka taageerada iyo iska caabinta, oo loo dhisay sida loogu baahan yahay aragti ahaan - marka loo eego ugu badnaan maxalliga ah iyo ugu yar. Waa wax macquul ah in loo maleeyo in ka soo kabashada taageerada ay muujineyso in iibsadayaashu ay awood u leeyihiin inay sii wadaan dhaqaajinta, iyo iibsadayaasha goobaha iska caabbinta waxay isku dayayaan inay beddelaan isbeddelka. Calaamadda binary ee ganacsiga , markay guuleystaan, waxay noqon doontaa burburka ugu dambeeya ee khadka taageerada.
Qaar badan oo ka mid ah aragtiyaha iyo falanqeeyayaasha ayaa ku khilaafsan tan, iyagoo ku doodaya in heerarka taageerada iyo iska caabinta ay muuqdaan oo keliya marka kuwa suuq geynaya ay xiiseynayaan qiimaha. Way adag tahay in lagala doodo tan isbeddellada dhexdhexaadka ah iyo muddada-dheer, laakiin marka ganacsi laga ganacsanayo, halkaas oo ay ku yaalliin ganacsato yaryar iyo dhexdhexaad ah, arrimo dheeraad ah ayaa muuqda. Ma aha wax qarsoodi ah in ganacsatada badankood ay wax ku bartay sida ku xusan shuqullada caadiga ah ee Williams, Elder iyo "gurus" kale.
Qof kastaa sidoo kale wuu ogyahay heerarka taageerada iyo caabbinta Fibonacci, sidaa darteed, marka qiimaha uu yimaado sixitaanka xisaabinta, waxaa jira rabitaan ah in la xiro booska hadda jira "aragti ahaan". Tani waa hal tusaale oo kaliya sida, kaliya arrimaha maskaxda, heer cusub looga heli karo meesha aysan aheyn marka la eego isu dheelitirka awoodda hadda.
Siyaabaha loo dhiso heerarka taageerada iyo iska caabinta
Si la mid ah sameynta qaababka shumaca, tayada ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah s waxay kuxirantahay sida ganacsade gaar ah uu u arko shaxda. Meesha tababartu uusan waxba arkin, xirfadlaha ayaa ka heli kara meel laga soo galo oo la isku halleyn karo, sidaa darteed ma jiro kala sooc cad oo aagagga ah halka qiimaha uu gaabis ku noqon karo dhaqdhaqaaqa. Waxaa jira dhowr habab oo caalami ah oo lagu dhiso dhismo taageero / iska caabin ah oo loo adeegsan karo hanti kasta iyo waqtiga:
Isticmaalka looxyo badan
Sida aalad kale oo farsamo, heerarka lagu kalsoonaan karo, waqtiga ugu weyn ee ay ku dhisan yihiin. Had iyo jeer ku billow inaad calaamadeysato ugu yaraan H1 ka dibna u beddelo jadwalka hoose. Isla mar ahaantaana, heerarka sare waa in la ilaaliyaa; tani waxay kaa caawin doontaa inaadan luminin xakameynta isbeddellada muddada-dheer iyo muddada-dheer.
Heerarka taakulaynta iyo iska caabbintu waa inaysan isku mid noqon "tilmaamid" gaar ahaan maadaama tani ay marar dhif ah dhacdo oo calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaari ikhtiyaari ah ay tan tixgeliyaan. Badanaa, tani waa aag cabbirro kaladuwan leh iyadoo kuxiran isbeddelka hadda jira, halkaas oo qiimaha uu ku joogsan karo dhaqdhaqaaqiisa.
Cusub ugu badnaan / uguyar
Qof kastaa wuu ogyahay qaanuunka "heerkii hore ee taageerada ka dib jabitaankeedu wuxuu noqdaa iska caabin cusub oo taa lidkeed - iska caabintii hore waxay noqotaa taageero cusub". Jaantusku wuxuu muujinayaa isbeddelkan sida joogtada ah ee sarreeya ama hoos udhaca maxalliga ah iyadoo kuxiran jihada isbeddelka.
Heerarka noocan ah ee "beddelashada" waxaa la dhisaa oo keliya marka ay si buuxda u dhismaan. Way fiicantahay markii qiimaha ka hor jabku uu ku jiray isugeyn kooban. Hadda waxaad ku ganacsan kartaa isbeddel ama dib u soo noqosho.
Xisaabinta macaashka iyo dhicitaanka
Sidaad ogtahay, kiisaska badankood qiimaha wax kasta oo hanti ahi waxay ku jirtaa qaybaha dambe, markaa waxaad u baahan tahay inaad si sax ah u ganacsato, oo aan ahayn oo keliya sida ay wax u socdaan. Waa muhiim in la go'aamiyo cabirka dhaqdhaqaaqa kala duwan, ka dibna taakuleyn / iska caabin ayaa loo isticmaali karaa si loo xisaabiyo qiimaha ugu wanaagsan ee muddada calaamadaha ganacsiga nool .
Waxaan had iyo jeer eegeynaa sida taageerada / iska caabinta hadda jirta ay ula jaanqaadayso waqtiga jadwalka sare. Way fiicnaan doontaa haddii ay sida ugu macquulsan isu dhowyihiin, laakiin had iyo jeer fiiri xaaladda. Malaha heerarka "dheer" waa la iska indhatiri karaa, gaar ahaan waqtiyada hoose.
Tusaalooyinka sida ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah u muujiyo xaqiijin ka timaadda heerarka taageerada / iska caabinta:
«Dhaqdhaqaaq leh»: Istaraatijiyad 5 daqiiqo ah oo ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ku socota
Faa'iido dhakhso leh istiraatiijiyad «Degdeg ah»
«3 EMA + Stochastic»: Istaraatiijiyad 5 daqiiqo ah oo ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah lagu kala doorto
50% hagaajinta isbeddelka
Sida ficil ahaan loo muujiyey, suuqa ayaa badanaa istaaga marka sicirka uu gaaro 50% ee dib u soo celinta tii hore, u gudbo dhinac dhinac ah, halkaas oo ay jiraan heerar lagu kalsoon yahay oo taageero / iska caabin ah.
Laga soo bilaabo sawirka aragtida cilmu-nafsiga ee suuqa, habdhaqankani wuxuu umuuqdaa mid macquul ah - isbaddallada noocan oo kale ah waxay keeneysaa shaki ku saabsan sii socoshada isbeddelka, ganacsatada badankoodna waxay joogaan bannaanka suuqa.
Ku noqo kala duwanaanta ganacsiga
Fikradda ugu weyn ayaa ah inaan marka hore go'aamino taageerada / iska caabinta udhaxeysa qiimaha dhaqaaqay, ka dibna waxaan rajeyneynaa muuqaalka muuqaalka dhabta ah ee calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah , tusaale ahaan, iyadoo la adeegsanayo habka Qiimaha Waxqabadka. Sawirku wuxuu muujinayaa sida baarka Pin uu u siinayo calaamadda iibsiga oo cad khadadka taageerada.
Aagga dhacdooyinka sida heerarka taageerada iyo iska caabinta
"Aagagga Dhacdooyinka" waa meelaha ay jaantuska sicirka ahi kaga falceliyaan dhacdooyinka xoogga leh, sida sii deynta wararka aasaasiga ah ama muuqaalka isbadal xoog leh. Sawirka, waxaan arki karnaa sida shumaca Doji uu u muujinayo istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah bilowga dhaqdhaqaaqa hoos u dhaca.
Marka qiimaha uu ku soo laabto aaggan, waxaad ka raadin kartaa xaqiijin dheeri ah barnaamijyada calaamadaha binary ee ganacsiga iibka ah ee furmaya ka dib markii uu jabiyay xadka hoose, oo sidoo kale ah iska caabin. Dhamaadka ikhtiyaarka ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa lagu dejiyaa xadka ka soo horjeedka (taageerada) ee kala duwanaanta ganacsiga.
Heerarka Taageerada Dynamic
Hababka kor ku xusan ee lagu dhisayo taageerada iyo heerarka iska caabinta waxaa loo aanayn karaa "mid taagan" maxaa yeelay waxaa loo maleynayaa inaysan waqtiga isbeddelayn. Ikhtiyaar kale ayaa noqon kara in la raaco heerarka qiimaha ka dib, sida lagu sameeyo Celceliska Dhaqdhaqaaqa.
Habkani wuxuu sifiican u qeexayaa oo kaliya meelaha laga soo galo hadda laakiin sidoo kale isbeddel aasaasi ah oo ku saabsan xaaladda suuqa. Waxtarka ayaa kordha haddii qiimaha uu ku dhaqaaqo "heerka" ee Celceliska Dhaqdhaqaaqa sida Bollinger Bands ay sameeyaan.
Qaybta labaad ee maqaalka, waxaad baran doontaa sida loogu ganacsado ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah iyadoo la adeegsanayo heerarka taageerada / caabbinta caadiga ah.